Yaa Oromoo tokkummaa kee mirkanneeffadhu fuurmaata waaliif ta’ii – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosYaa Oromoo tokkummaa kee mirkanneeffadhu fuurmaata waaliif ta’ii
Yaa Oromoo tokkummaa kee mirkanneeffadhu fuurmaata waaliif ta’ii
Viva mararaa kumsaa/Jaal Gammachuu Ayyaanaa (Koloneel) fi Lammaa Magarsaa
Maaliif Qondaaltoota olaanaa ABO keessaa daftee dura Gammachuu hiite OPDOn!?!
“Waa malee manni guyyaadhan hin aaru” jedha Oromoon.
Jaal Gammachuu Ayyaanaa goota ,kutataadha.ciniinnataa,nama funyaan saree jedhamuun beekamuudha.OPDO mitii wayyaneen Gammachuu sodaatti.Mootummaan Eetiriyaan mataanshee Jaal Gammachuu akka bakakkatti ilaalaatti.Dandeettii fi beekumsa addaa qaba.Ejjennoorratti sibiila.
Eenyuu ol immoo ciminaa fi gahumsa jaal Gammachuu Lammaa Magarsaatu beeka.Ijoollummaarra qabanii wal beeku.Hojii adda addaa irratti waliin hojjataniiru.Sabaaf waliin hojjechuuf waliin ijaarramaniiru.jaal Gammachuun osoo gara Eetiriyaa hin deemiin dura Koloneelummaa kan argate Waraana Wayyaanee ta’eeti.Yeroo turtii Waraana diinaa ta’e keessatti hangi diinaaf hojjetee fi diinarratti hojjete wal qixa miti.Diina waliin jiraachaa sabaaf galaa gumaachaa ture.Dooyaa qabsoo warraaqsaa #Funyaan_Saree jechuun akkasi.Gammeen yeroo wayyaaneen kibbatti ergite kibba oola.Baadiyyaatti yoo bobbasaan magaalaa.Ofiin bulaa ture.#Oolmansaa gara irra caalu #Karanbullaataphachuudha.Tooftaa kanaan Wayyaaneen kun Duuriyyeedha ittiin jettee itti dhiiste.Icciitii Lammaa Magarsaa Gammachuun tokko lamaan beeka.Lammaan Gammachuu danda’ee ilaaluu hin danda’u.Waan lammaan godhaa ture hunda beeka.Jaal Gammachuun ,Lammaa ajajaa tureera.
#Asmaraatti yeroo waliigaltee,Lammaan Asamaraa deeme sana Karaatti bahee kan dura simate jaal Gammachuu ture.Gaafuma ija Gammachuu argu dhadhaa abidda bu’e ta’e jedhama.Beekaaf ture.Jaal Gammachuu iddoo barbaachisaa jaraa sirriitti beeka.Keessoo fi irra,ciminaa fi dadhabina Waraana warraas ni beeka.Lammaa qofa miti Dr Abiyyii waliinis waa xiqqoo dalaguun hin hafne.Gammeen bakka isaan rafanitti balbala banee nutti seena sodaa jedhu irraa dafanii qabuu hin oolle.
Akkuma Jaaldeessi Re’ee dafee dura ija balleessu OPDOn nama jabaa keessoo ishee sirriitti beeku kana dursitee ukkaamsite.”
Egaa kanas ta’ee sana,ABOn nama jabaa akka Gammachuu hedduu qaba.Diinni yaaduma dadhaba.
#Seenaa kana kitaaba #Tasfaayee_GabraAb irraan fudhe.
FREE jaal Gammachuu ayyaanaa
JIJJIRAMNI OPDO KANADHA?
Mootummaan waliigaltee ABO wajjin taasifamee fi waadaa waliif seename cabseera. Kanaafuu ABOn maaliif Oromoo ficcisiisa? Koloneel #Gammachuu_Ayyaanaa fi #Faqqadaa_Raggaasaa hidhamuun mallattoo guddaa ragaa guddaa Mootummaan waliigaltee sana cabsuuti. ABOn obsa daangaa darbe obsaa jira. Qondaaltonni isaa tokko tokkoon butamanii hanga mana hidhaatti guuramanitti eegaa jira? Mootummaan Kun kan itti gaafatamummaan itti dhaga’amu miti. Mootummaan kashalabbootaa fi kosii mandaraa funaanamtee fi ijoollee mana bunaatti dhalatte kan TPLF bara 1991 “homeless “ funaantee nama goote akka #Abiyyi_Ahimad fa’atu biyya bulchaa jira. Isaan kanarraa waan gaarii eeguun hin taatu. ABO uummata Oromoof waamicha gochuu qaba. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhuun shira haaloo baafannaa Kamaal Galchuu fi Haayiluu Gonfaa xaxanidha. Dubbittiin roorroodha malee siyaasa miti. ABO n itti yaaduu qaba. Jarri kun hagganoota ABO hunda tokko tokkoon hiitee fi ajjeestee balleessuu barbaadfi! Kutannoon loluudha! Oromoof waamicha gochuu . Obsi daangaa qaba!
Jaal Amaan Filee, Itti gaafatamaan waajjira ABO kan Godina Wallagga bahaa humnoota tika mootummaan ukkaamsameera.
Miseensotaafi qondaaltota addichaa hidhaatti guuruun ni dandahama kaayyoofi galma qabsoo ABO fi qabsoo Oromoo garuu hidhuun hindandahamu.
Shirri OMN Jawwee Mohammed kana fakkata?
Maanguddoon kun obbo Balaay Yaadataa fi kkf jedhamu. Jiraataa magaalaa Gimbiiti. Guyyaa har’aa Oromoota biraa waliin qabamanii hidhaman.
Maanguddoon kun Oromoota yeroo Jawaar OMN fudhatee gara Oromiyaa Lixaatti imale sana marii hawaasaa irratti yaada kennan keessaa nama tokko turan. Har’a hidhamaniiru. Oromoota yeroo sana OMN irratti yaada kennan keessaa eenyutu hin hidhamin hafe?
Mee ilaalaa jamaa Waan gurbattii xawalwwaalleen kun jettu.utuu uummanni keenya lixa oromiyaa xiyyaaraan tumamaa jiru qabsoon bilisummaa oromoo injifannoon goolabamtee jirti jetti.
Ethiopia: ጥብቅ መረጃ – ተስፋዬ ኡርጊ: ከበግ ደላላነት – ጌታቸው አሰፋ ዋና ቀኝ እጅነት | Tesfaye Urgi | Getachew Assefa
Ayyaana cuuphaa ( Ximqat) ilaalchise Magaalotn Oromiyaa maal akka fakkaatan ilaala . Yeroo nuti lafa walitti dhiphifnuu isaan tokkof harka dhawaa siyaasa isaani ballifatu.
ቤ/ክርስቲያን እና በዐላትን ለፖለቲካ ፍጆታ ማዋል ነውር ነው
OMN: “Dubbii Cirodhumte”
Jaal Jabeeysaa Gabbisaa miseensa SH G ABO kan har a opdon hiite!
Mass arrest continues in Oromia
These include OLF members and leaders intimidation and harassment vastly happening in various areas in Oromia
#Oromia-Miseensota fi Deegagrtoota ABO #Hidhaa fi #Ajjeechaa
1. J.Jabeessaa Gabbisaa MSGABO
2. J.Amaan Filee BBWABO NAQAMTEE
3. J.Bulii Ejjeetaa BBKSABO
4. J.Galgaloo Waariyoo
5. J.Dambii Tashoomaa
6. J.Iddoosaa Taaddasaa
7. Obbo Balaay Yaadataa Gimbii
8. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa
9. Faqqadaa Raggasaa
10. Obbo Getaachoo Bayyanaa (abbooti qabeenyaaf jaarsoolii biyyaa)
11. Obbo Qanaatee Ayyaanaa (abbooti qabeenyaaf jaarsoolii biyyaa)
12. Obboo Getaachoo Tolasaa (Shaanqoo) abbaa qabeenyaa.
13. Obbo Dastaa Lataa abbaa qabeenyaa
14. Obbo Awaluu Nagaadraas abbaa qabeenyaa
15. Obbo Nuuruu Baqqalaa abbaa qabeenyaa
16. Obbo Margaa Fayisaa hojeetaa Mot.
17. Anuumaa Darajjee Qeerroo
18. Guutamaa Gaaromaa Qeerroo
19. Dastaa Moosisaa Qeerroo
20. Mootummaa Gabayyoo barataa
21. Darajjee Guddataa barataa
22. Ababa Raggaasaa barata
23. Obbo Fiqiruu Nagaasaa,
24. Aadde Aagee Tarfaa,
25. Raguueel Hayiluu,
26. Henook yohannis,
27. Burqaa Biraanu,
28. Isiyaaq Zalalem fi
29. Solomon Shaanqoo
30. J/ Abbilee Dheeree /Buttaa Odaa/ (Miseensa #WBO)
31. Dajjaamach Bayyanaa (Shaambuu)
32. Lookoo Guutamaa Manguddoo waggaa 65 (Wallaggaa Lixa Jaarsoo)
33. Dawiit Qajeelaa Abbaa Gadaa Jaarsoo (Wallaggaa Lixa Jaarsoo)
34. Dabala Fiqiruu (Wallaggaa Lixa Jaarsoo)
35. Diinqaa Adamuu (Wallaggaa Lixa Jaarsoo)
36. Fiqiruu Tadasaa barsisa (Wallaggaa Lixa Jaarsoo)
37. Cuuccaa Mulgeeta (Wallaggaa Lixa Jaarsoo)
38. Barsiisaa Akiliiluu Hordofaa (Dambi Doolloo)
39. Barataa Burqaa Yaaloo (yuunversiitii Walqixxee)
40. Naahiil Ababaa (Barsisaa Universty Amboo)
41. Dargaggoo Dukkallee Holotaa, Ona Qarcaa ganda Lamii Hirphaatti waraana EPRDFn ajjeesame
42. Turee Uddeessaa, Ona Qarcaa ganda Lamii Hirphaatti rasaasaan mataa keessa dhahamee amma Hospitaala Bulee Horaatti waldhaanamaa jira
43. Mijuu Birbirsaa, Ona Qarcaa magaalaa Qarcaa ganda 01tti ajjeesame
44. Abarraa Duuloo, magaalaa Qarcaa ganda 01tti ajjeesame
45. Taarikuu Elemaa, magaalaa Qarcaa ganda 02tti ajjeesame
46. Milkeessaa Galgaloo, magaalaa Qarcaa ganda 02tti ajjeesame
47. Tasfaayee Wubee, konkolaachisaa Ambulaansii magaala Qarcaa ganda 01tti ajjeesame
48. Alamuu Waddeessaa, magaala Qarcaa ganda 01tti ajjeesame
49. Roobalee Gammadee, ganda Lamii Qarcaatti ajjeesame
50. Guyyee Boggaalee, magaalaa Garbaa ganda 01tti ajjeesame
51. Lammii Hoxxeessaa, ganda Lamii Qarcaatti ajjeesame
52. Bariisoo Quruuxaa, maanguddoo ganna 80 ganda Lamii Hirphaa iddoo addaa Kellaa Fayyaa jedhamutti ajjeesaman.
53. Aadde Dukkee Shaggee maanguddoo ganna 70 Ona Qarcaa ganda Boorottuutti ajjeesaman.
54. Girmaa Dastaa jedhama. Lixa Shaggar Kaachisiirraa humna waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin qabamee hidhame.
Ethiopian rebel group accuses government of airstrikes